I-China H20 Timber Beam Column Formwork ifektri nabahlinzeki |I-Lianggong
Indlela yokwenza ikholomu yogodo isetshenziswa kakhulu ekubumbeni amakholomu, futhi ukwakheka kwayo nendlela yokuxhuma ifana ncamashi neyokwakhiwa kodonga.
Indlela yokwenza ikholomu yogodo isetshenziswa kakhulu ekubumbeni amakholomu, futhi ukwakheka kwayo nendlela yokuxhuma ifana ncamashi neyokwakhiwa kodonga.Ukuvumelana nezimo okuphezulu okunezingxenye ezimbalwa kuphela eziyinhloko kungahlangabezana nanoma yiziphi izidingo zokwakha, ezifana ne-wood beam H20, insimbi yokufaka insimbi, i-plywood ne-clamp njll.
Okubalulekile Q235 Steel, Timber Beam, Plywood
Umbala Ngokwezifiso Noma Okuphuzi, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okunsundu
Usayizi Ukwakheka Okubanzi
Ubukhulu.umfutho ovumelekile ngu-80kN/m2.
Kulula ukuthatha noma iyiphi ingcindezi kakhonkolo entsha ngokulungisa indawo yesakhiwo phakathi kwe-H20 nama-waler.
Isigaba se-Max.Cross ngu-1.0mx1.0m ngaphandle kwe-in-through tie rod.
Ukulungiswa okuvumelana nezimo ukuze kulingane ubukhulu bekholomu obuhlukile.
Uhlelo lwekholomu yepulangwe elungisekayo
Indlela yokwenza ikholomu elungisekayo inika amandla ukusakazwa okuphathekayo kwamakholomu ayisikwele noma angunxande phakathi kobubanzi obuthile ngokulungisa usayizi wendawo yesigaba se-formwork.Ukulungiswa kutholwa ngokushintsha indawo ehlobene yama-waler.
Kukhona ukucaciswa okuthathu kwama-waler of formwork yekholomu eguquguqukayo, engakwazi ukwenza ukhonkolo wamakholomu ayisikwele noma angama-rectangular anobude obuseceleni obungu-200-1400mm.Osayizi bekholomu bazosakazwa ngale ndlela elandelayo:
Ubude be-waler (m)
Ububanzi bobude obuseceleni bekholomu obuzosakazwa (m)
1.6 kanye no-1.9
1.6 kanye no-1.3
1.3 kanye no-0.9
Ingalungiswa ibe yinoma yimuphi usayizi wesigaba esiphambene phakathi kwebanga elivumelekile, kokubili isikwele nonxande.Umdwebo wokulungisa umi kanje:
Umkaki we-diagonal odongeni
I-formwork yodonga lwekholomu yogodo idinga ukuhlonyiswa nge-spindle strut, esetshenziswa njengesistimu yokulungisa njengoba kukhonjisiwe emfanekisweni:
Nikeza ukwesekwa kuzo zonke izigaba zamaphrojekthi
1. Nikeza i-cosult lapho iklayenti libamba iqhaza kwisimemo sebhidi yamaphrojekthi.
2. Nikeza ngesixazululo sethenda esenziwe kahle kumsizi weklayenti ukuze awine iphrojekthi.
3. Ukuthuthukisa idizayini yefomula, ukulungisa uhlelo lokuqala, kanye nokuhlola umkhawulo wobudlelwano phakathi kokuhlinzeka nokufunwa.
4. Qala ukuklama ifomu ngokuningiliziwe ngokuya ngebhidi ewinile.
5. Nikeza iphakethe lesixazululo se-formwork yezomnotho futhi unikeze insizakalo yokusekela eqhubekayo endaweni.
1. Ngokuvamile, ingqikithi yesisindo sengqikithi yesiqukathi esilayishiwe singamathani angama-22 kuya kwangu-26, okudingeka aqinisekiswe ngaphambi kokulayisha.
2. Amaphakheji ahlukene asetshenziselwa imikhiqizo ehlukene:
---inqwaba: ugongolo lwepulangwe, izinsiza zensimbi, induku yokubopha, njll.
---Iphalethi: izingxenye ezincane zizofakwa ezikhwameni bese zifakwa kumaphalethi.
---amakesi okhuni: itholakala ngesicelo sekhasimende.
---inqwaba: ezinye izimpahla ezingajwayelekile zizolayishwa ngobuningi esitsheni.
1. Ukukhiqiza: Ukuze uthole isitsha esigcwele, ngokuvamile sidinga izinsuku ezingu-20-30 ngemva kokuthola inkokhelo ephansi yekhasimende.
2. Ezokuthutha: Kuya ngembobo yokushaja indawo oya kuyo.
3. Ukuxoxisana kuyadingeka ngezidingo ezikhethekile.
Okwedlule: Induku Yokubopha
Olandelayo: Plastic Wall Formwork